Free Download Adobe Rashka CS4 u Mac | MacArsenal
> Resource > Mac > Adobe Rashka CS4 u Mac
Adobe Rashka CS4 waa codsi ah oo awood u isticmaala inay xaalkaa bitmap iyo dulinka muuqaallo kale. Version Tani waxaa si gaar ah loogu talagalay dadka isticmaala Mac. Barnaamijkan dedejisaa design Web iyo horumarinta ee aad awood siiyo si ay u abuuraan oo ay tayadoodii Web images istareexsan. Waxa kale oo qalab ku haboon si ay u abuuraan prototypes website iyo interfaces codsi degdeg ah. Waa maxay dheeraad ah, waxa ay dadka dhexgalaan karaa waxyaabaha kale ee Adobe, oo ay ku jiraan Adobe Dreamweaver iyo Adobe Flash.
Bitmap iyo naqshadeynta dulinka tafatirka
Adobe Rashka CS4 awood u isticmaala si ay u abuuraan iyo edit bitmap iyo dulinka muuqaallo kale.
Photoshop iyo IIIustrator dhexgalka hufan
Waa maxay dheeraad ah, Adobe Rashka CS4 u Mac taageertaa Photoshop iyo IIIustrator is-dhexgalka. Waxaa dajiyaan karaa Photoshop (PSD) iyo IIIustrator (AI) gudbiyo si hufan.
Adobe Rashka CS4 waa bitmap iyo naqshadeynta dulinka editor awood leh. Waxa ay taageertaa nidaamka qalliinka Mac OS X. Iyadoo Adobe Rashka CS4, dadka isticmaala waxay awoodi karaan in ay la kulmaan tiro ka mid ah qaababka fiican. Tusaale ahaan, waxa ay awoodaan in ay dardar-design Web iyo horumarinta. Oo waxaa la, users abuuri karaan oo xoojiya Web sawirada. Sidoo kale waxa ay codsi u fiican oo taageera samaynta web si ay u abuuraan prototypes website iyo interfaces codsiga si degdeg ah oo sax ah. Waxa intaa dheer in sifooyinka kor ku xusan, Adobe Rashka CS4 dhexgalaan karaa waxyaabaha kale ee Adobe, oo ay ku jiraan Adobe Dreamweaver iyo Adobe Flash, taas oo ah mid aad u sahlan tahay samaynta web in xaalkaa sawirada.
Waxaa jira qaar ka mid ah hagaajinta version this. Waxa uu go'an dhammaan cayayaanka shil iyo khasaaro xogta loo yaqaan. Oo waxaa sidoo kale ka go'an shil on dhibaato ka tago Snow Leopard. Xasiloonida ee isticmaala socda Rashka CS4 on Mac OS X ayaa sidoo kale la wanaajiyey. Waxaan si adag ugu talinaynaa in aad kala soo bixi software this.
Vision Raadka: Twixtor u Mac
Hel Back Data ka Hard Drive la Mac Disk Recovery Software